Somaliland.Org » CODKAAGA KU CIIL BAX-(16). DHACDOOYIN TAARIIKHI AH
OPINIONCODKAAGA KU CIIL BAX-(16). DHACDOOYIN TAARIIKHI AH
September 28th, 2009 Comments Off Codka muwaadinku waa codbixin warqadeed xilliga doorashada, xiliyada kale waa bandhig fikradeed oo qoraal, hadal iyo muuqaal ah. Muuqaalka waxa ka mid ah dhoola-tus, isu-soo-bax, shirar iyo banaanbax lagu muujiyo dareenka muwaadinka. Waa tiirarka dimuquraadiyadda, meesha laga waayo xorriyadda muujinta dareenka muwaadinku waxa lagu sifeeyaa meel u xaglisa dhinaca qorax dhaca qarannimo dimuquraadi ah, oo meel haddayna ahayn mudgi kelitalisnimo, cagta saartay dhabadii u kaxayn lahayd dhinacaas. Kelitalisnimadu ma aha marka xadhig iyo dil jiro oo keliya, waa dal awoodda talisku ku uruurto gacan keliya, oo ayna jirin wada-tashi iyo wax is weydiin, xataa haddayna ka jirin xad gudub xorriyadda aadmiga ahayni.
Waa nidaam sharci ah oon lays hor